Wetterhounen Imbwa Inobereka Ruzivo - Inobereka
Wetterhounen Imbwa Inobereka Ruzivo
Zvikamu zvekuchamhembe kweNetherlands zvakambove zvakasarudzika. Nekuda kweizvozvo, vanhu vematunhu aya vakagadzira yavo yakasarudzika mitauro, tsika, uye kunyangwe avo vekwavo vanozvarwa imbwa. Imwe yemienzaniso inokatyamadza yeiyo yekupedzisira ndeye Wetterhoun (inonzi VETTERHOWN), imbwa yakasarudzika, ine vhudzi rakamonana rakazvarwa mudunhu reDutch reFriesland.
Pakutanga yaishandiswa kuvhima otters uye polecats, inozivikanwa nemazita akasiyana siyana anosanganisira Otterhoun, iyo Dutch Spaniel, uye neDutch Water Spaniel. Icho chiri pakati pemarudzi eFresian anozivikanwa neDutch Kennel Club muna 1942.
Unhu uye Hutungamiriri
Hutano uye Matambudziko Ekurapa
Sezvazvinoita nekuwanda kwembwa, Wetterhoun chaiyo chaiyo mavambo iri mukukakavara. Spaniel-senge imbwa dzave chiri chikamu chenhoroondo yekumaruwa yeFriesland kwenguva yakareba sekugona kwevanhu kuyeuka. Nekudaro, hapana nhoroondo yezvakaitika zvinoratidza kuti imbwa dzakamonana dzakamonana dzeWetterhoun mhando dzaivapo muHolland pakutanga kwezana ramakore rechi19.
Saka zvinofungidzirwa kuti Wetterhoun irudzi rwezvakangoitika zvichangoburwa, pamwe zvinomuka kubva pamuchinjikwa pakati pembwa dzekuFresian nembwa dzemvura spaniel uye / kana spitz madzitateguru. Ichi chikamu chekupedzisira chingangodaro chakatengwa kubva kuRussia, Greenland, kana chero nyika dzakavakidzana dzeBaltic dzine vaFresia vane hukama hwakakura hwekutengeserana mumazana emakore apfuura.
Pakati penguva yeHondo Yenyika Yechipiri, maDutch imbwa vanofuratira vakazvitorera pachavo kuziva, kuchengetedza, nekusimudzira iyo Wetterhoun serudzi rwakasiyana. Pakati peavo vafudzi paive nemurume ainzi Jan Bos, uyo akatungamira kuyedza kuziva nekunyoresa boka reWetterhounen raienderana neyakajairika mhando yerudzi.
Bos anonzi akasvika kune varidzi vanoverengeka uye vafudzi vane imbwa dzakasangana nemufananidzo wake wakanaka weWetterhoun ndokunyengetedza vanhu ava kuti vauye nembwa dzavo kumazuva ekutanga 'ekuongorora' ayo akaitirwa mutaundi reLeeuwarden.
Idzi imbwa dzakakodzera kugadziriswa dzakabva dzaiswa muyedzo yekuvhima iyo yaiyera kugona kwavo kuchera tupukanana, kutora mvura, uye kuteedzera mhuka pasi. Mazita ezvienzaniso zvinogamuchirwa zvakabva zvaiswa mune yekuwedzera yeDutch Pedigree Rejista.
Kuongorora uye kuyedza kuyedza kwakaitwa nguva nenguva mukati nekunze kweFriesland kusvika pakutanga kwema1960, zvichibvumira gumi nemaviri Wetterhounen kunyoreswa. Panguva iyoyo, appendikisi yakavharwa kuti ienderere mberi nezvinyorwa, uye idzi imbwa dzekutanga dzakava iro rakajairika boka kubva kwese kwese kwemberi kwemhando dzakatorwa.
Mukuyedza kuwana mukana werudzi rwavo, nhengo dzekirabhu ichangoumbwa yekuberekesa vakatora yavo Wetterhounen munzira, vachienda kunoratidza imbwa kuRotterdam neAmsterdam. Kuti varatidze kusimudzira kwerudzi urwu, vanofarira ava vakahaya zvipfeko zvechivanhu zveFresian uye mabhiza eFresian anodhonzwa nemabhiza.
Chitarisiko chavo chakavawanisa misoro mumapepanhau makuru eguta, uye kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, iyo Wetterhoun nenhaka yayo yeFresian yakave ichizivikanwa zvakanyanya kune vanofarira imbwa pasi rese.
Yekutanga Wetterhounen aisiyana zvakanyanya pakuonekwa. Mavara aisanganisira dema uye chena, chena, grey, imbwa dzine zvigamba zvitsvuku, uye kunyange nhema uye tan. Ikoko kwaivewo nemusiyano wakakura wejasi dhizaini kubva pawakakomberedzwa kusvika wakasununguka wakamonyoroka kusvika wakazara zvakakwana.
Kunyangwe paine pfungwa dzekufungidzira dzevakasiyana siyana vanofarira kuti iyo 'yakanaka' Wetterhoun inofanira kutaridzika sei, kirabhu yekuberekesa yakatora chiyero chakanyorwa, icho chakabatsira kuunza kufanana kwakaenzana kuWetterhoun mumakore apfuura.
Kunyangwe haicharambidzirwe chete kuFriesland, iyo Wetterhoun zvakadaro inoramba iri mhando isingawanzoitika, isingawanzoonekwa kunze kweHolland. Haisi shamwari inozivikanwa yekuvhima, kunyangwe vashoma vakapasa muedzo dzekuvhima uye vakawana madhipuroma kubva kuRoyal Dutch Hunters Association.
Iyo imbwa parizvino dzinokwikwidza muHolland's 'B' kupatsanurwa kwema spaniel, pamwe nedzimwe imbwa dzerudzi rwakafanana, senge yeIrish Water Spaniel. Vamwe vashoma vanokwikwidza mumakwikwi ebhenji, asi rudzi rwacho rwuchiri kuzivikanwa kwazvo se 'imbwa yadhi' - kuchengetedza zvivakwa zvepurazi zveFresia zvisina mapango, uye minda yepurazi isina mamota. Inowanzoitika munzvimbo dzemvura dzakasungwa kumaodzanyemba kwakadziva kumaodzanyemba uye kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweFriesland.
Ruzivo rwezvakaitika pamwe zvisiri izvo zvinonongedzera kuWetterhoun se 'inotyisa'. Izvi zvinogona kuve chikamu nekuda kwekutyisidzira 'kurira' kutaura kwembwa. Hunhu hwechokwadi hweWetterhoun ndeuyo wembwa nyoro asi yakazvimirira iyo inochengeterwa nevasingazive.
Vanhu vazhinji vanorondedzera iyo imbwa seye stoic uye yakashinga. Mufudzi wenguva refu JP Otto anoyeuka achiona Wetterhoun 'akatarisa pasi' Mufudzi wechiGerman akarasika uyo akambotonga nekurwisa imbwa dzese mutaundi. Otto anonzwa kuti uku kuzvibata uye kutsiga ndizvo zvinopa Wetterhoun zita rayo - anoomerera kuti 'Wetterhoun' haisi dudziro chaiyo ye 'hound yemvura', asi pachinzvimbo ichibva kumutsara wemuGerman. munhuhwi , zvichireva, 'kuba mweya wake wekupedzisira'.
Iyo Wetterhoun ndeye yakasarudzika retriever yeese ari maviri manhenga uye feather. Inoenda kutsime remvura, ine dhiraivhi yakasimba, uye jasi rayo rakakora, rine mafuta, rinodzora mvura rinoita kuti rikodzere kushanda munzvimbo dzakaipa kana mamiriro ekunze. Chido chayo chekuvhima chakaoma kugutsa, uye kana chakadzvanywa mudhadha rakapofomara, rinozoshandukira mukuteedzera mbeva.
Ine mhuno yakanakisa uye yakashandiswa kufuriza munzvimbo dzakakwirira. Nekudaro, iko kuberekana hakuwanzo kuve mutambi anoenderana, uye kazhinji inofungidzirwa kunge yakasindimara kudzidziswa hunyanzvi hwekudzoreredza hunyanzvi.
Hunhu hweWetterhoun hwakasarudzika zvechokwadi. Hunhu hwayo hwekuvhima uye hunhu hwakachengetedzwa hwatungamira mukuenzanisa nembwa dzemitambo dzakadai seChesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, uye American Water Spaniel, kana imbwa dzepasi senge Fox kana Jack Russell Terrier.
Hazvisi nyore kuwana simba pamusoro peWetterhoun; varidzi vanofanira kutanga vavaka hukama hwakanaka nembwa. Kurovedza kunofanira kutanga kare uye kunofanirwa kuenderera mberi mukati mehupenyu hwese hwembwa hwevakuru. Kushivirira kunokosha; kukurumidza zvakanyanya kana kushanda zvakawandisa kunounza mhedzisiro isiriyo. Wetterhoun inokurumidza kufurirwa uye chero kusabatwa kwakanaka kuchayeukwa kwenguva refu.
Nekuda kwehunhu hwayo hukuru uye hunhu hwekudya, iyo Wetterhoun inogona kunge isiri sarudzo yakanakisa yemisha ine zvimwe zvipfuyo, kunze kwekunge zvaziviswa kwavari vachiri vadiki. Aimbove muFresian horticulturalist Frans Haven aigara aine matambudziko nekitsi dzakarasika-dzaive netsika yekugadzira mabhokisi emarara kubva munzvimbo dzekuwaridza munzvimbo yake yekuchengetera. Pane kanopfuura kamwe chiitiko, Haven's Wetterhouns yakaita pfupi kubva kune vashoma veava vashanyi venguva dzehusiku.
Iyo Wetterhoun kazhinji haina kubatika kune huwandu hwezvirwere zvinotambudza dzakakurumbira, imbwa dzinopfuyiwa zvakanyanya. Nekudaro, iro rekutanga geni dziva reWetterhounen yakanyoreswa yaive diki kwazvo, uye pfari uye canine hip dysplasia zvino zvazara. Nekuda kwematambudziko aya, kuyedza kwakaitwa mumakore achangopfuura kuvhurazve registry kuitira kuunza 'ropa nyowani' kusimudzira hunhu hwemhando.
Wetterhounen pano neapo anotambura nekurasikirwa nevhudzi. Imbwa shoma dzave kunge dzakarapwa zvinobudirira nevhitamini kurapwa, asi zvimwe zviitiko zvinoratidza autoimmune kusagadzikana kwakafanana neicho chinowanzoitika mune dzimwe dzakamonana-dzakaberekwa marudzi.
KUONEKA KWAZVO : Imbwa yakapusa iyo, kubva kune yekare, yaivhima otters 'isina cumber kana kupaza'. Yakavakwa zvine simba, mativi uye akagwamba, rakasimba ganda risina huro hwakawandisa kana akasununguka flews.
ZVO : Imbwa nyoro asi yakasindimara. Yakachengeterwa nevasingazive. Imbwa yakanaka yekutarisa.
MUSORO : Yakakura maererano nemuviri, yakasimba uye ine simba. Dehenya nemhino zvakaenzana zvakaenzana. Dehenya iri rakakombama zvishoma richiita kunge rakapamhamha kupfuura refu, kutenderera pamusoro pematama ane misungo yematama yakanyatsogadziriswa. Kumira kunotsanangurwa zvine mwero. Iyo snout yakasimba kuve ichingori shoma kudiki pane iyo mhino ine zvishoma inoteedzera kune snippiness.
Bhiriji remhino, rinoonekwa kubva padivi, harioneki rakatenderera kana mhango. Bhiriji rakafara uye mhino yakanyatsogadzirwa nemhino dzakavhurika. Iyo miromo yakavharwa zvakanaka uye haina kuturika. Akasimba, mazino akapinza.
Nzeve : Kutanga pasi, nzeve haina kusimbiswa zvakanyanya. Izvo zvinodiwa kuti nzeve iturike isina kubata musoro. Nzeve idzi dzakareba urefu uye trowel yakagadzirwa. Vhudzi riri panzeve rakakombama, rakareba pachigadziko richiita ipfupi sezvo richidzika kusvika kunoperera nzeve.
MAZISO : Saizi yepakati, yakaumbika zai nemaziso akanaka pasina kuona conjunctiva. Ivo vanogara kumashure pamusoro vachipa hunhu hunotyisa asi havafanirwe kunyudzwa kana kubhowa.
MHOSI : Dema kune imbwa dzine dema denderedzwa ruvara uye shava kune avo vane brown base base color. Kwete kupatsanurwa. Mhino dzakanaka dzakavhurika uye neyakagadzirwa zvakanaka nzvimbo.
Mutsipa : Ipfupi uye yakasimba, yakatenderera nemakona asina kujeka anomhanya mumutsara weshure saka musoro unotakurwa wakaderera zvishoma. Zvishoma zvakapetwa pasina hang kana bulge.
CHEST : Inoonekwa kubva kumberi, yakafara, yakafara kupfuura yakadzika uye nekudaro makumbo epamberi ari kure kure. Rounder pasi pechipfuva inosvika chete kusvika kumagokora.
MUVIRI : Simba. Mbabvu dzakatenderedzwa. Yakanyatso kukura yakatwasuka ipfupi kumashure ine chete zvishoma tapering kumusoro. Chiuno chakasimba uye chakasimudza mudumbu zvishoma.
MUSWE : Yakareba uye yakakungurutswa kumhepo.
KUMASHURE MBERI : Mapfudzi akanyatsokwana muviri. Makumbo emapfudzi akatsvedza uye akasungwa zvakanaka. Rutivi rwepazasi rwakasimba, rwakatwasuka uye rwusina kutsvedza, tsoka dzakatenderedzwa, zvigunwe zvakavanzika zvakavanzika uye zvigaro zvakasimba.
KUMASHURE MBERI : Simba uye rakashongedzwa zvakanaka pasina gumbo rakawandisa. Tsoka dzekumashure dzakanyatsogadziriswa neakasimba tsoka.
Bvudzi : Kunze kwemusoro nemakumbo, akafukidzwa nemakobvu akakombama. Yakasimba uye tufty curls. Akawanda mac curls kana makutu mune matete matinji anopa kuonekera kwemvere kutaridzika hakuna kunaka kurudzi. Bvudzi racho rakatetepa uye rinonzwa kuvesa. Bvudzi riri mumusoro rinowanzove rakanyorova zvishoma.
COLOR : Brown, nhema, kana chero ruvara rwakasanganiswa nemuchena.
SIZE: Saizi yakanaka ndeye 59 cm yevanhurume uye 55 cm yevakadzi.
Wako wekupedzisira mutungamiri kuGerman Mufudzi Wolf musanganiswa
Iyo Shichon (AKA Shih Tzu uye Bichon Sanganisa): Zvese zvaunoda kuti uzive
imbwa yangu ndeipi pitbull
kune marudzi akasiyana-siyana emagomba mabhuru
husky german shepherd rottweiler musanganiswa